Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Egypt » Ny sidina avy any Russia mankany Egypt dia manohy ny resa-dranomasina mena
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Egypt • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nanohy ny sidina mivantana tany amin'ny resa-dranomasina Mena Hurghada sy Sharm el-Sheikh i Russia, namarana ny fandrarana naharitra efa ho enin-taona taorian'ny fipoahan'ny fiaramanidina rosiana nahafaty olona 224 tao anatiny.
Fiaramanidina mivantana telo avy any Mosko no tonga tany amin'ireo tanàna roa fampiantranoana egyptiana tamin'ny Alatsinainy.
Nandray ny sidina fizahan-tany roa avy tany Russia i Hurghada.
Nandray ny sidina voalohany avy any Russia tao anatin'ny 6 taona i Sharm el-Sheikh.
Nanambara ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily ao Egypt fa telo izany Ny sidina mivantana avy any Mosko dia tonga tany amin'ny tanàna fampiantranoana ejipsiana roa omaly, niaraka niarahaba an'i Hurghada ny roa tamin'izy ireo ary nampiantrano iray hafa i Sharm el-Sheikh.
Nofaranan'i Russia ihany ny fandraràny ny sidina tany Egypt izay naharitra efa ho enin-taona, taorian'ny fipoahan'ny fiaramanidina mpandeha Rosiana izay namono ny olona 224 rehetra tao anaty sambo, ary nanohy ny sidina mivantana avy any Moskoa nankany amin'ny resort Red Hurghada any Hurghada sy Sharm el-Sheikh amin'ny alatsinainy.
"Ny sidina telo dia nanamarika ny fiandohan'ny dingana vaovao amin'ny famerenana ny fizahan-tany Rosiana mankany amin'ireo tanàn-dehibe roa resin'ny Ranomasina Mena Hurghada sy Sharm El-Sheikh, ”hoy ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily any Egypte tao anaty fanambarana iray.
Ny fiaramanidina rosiana dia noraisin'ny fiarahabana rano ho fombafomba tamin'ny fahazoana sidina vaovao taorian'ny fipetrahana, raha nandray ny mpitsidika ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny raozy, fahatsiarovana ary mozika nentim-paharazana.
Ny sidina mivantana mankany amin'ny Resa-dranomasina Mena dia fanampiana ny sidina isan'andro mandeha eo Kairo sy Moskoa, miaraka amin'ny tanjona hisarihana mpizahatany rosiana betsaka indrindra any Egypte, hoy i Abul-Enein, hoy ny talen'ny tale jeneralin'ny EgyptAir Airlines.
Misy sidina ejipsiana fito mivantana mankany amin'ny tanàna fialan-tsasatry ny Ranomasina Mena isan-kerinandro, ary ny tsirairay dia mahazaka mpandeha 301 hamaly ny fangatahana andrasan'ny mpizahatany rosiana, raha ny sidina fiaramanidina rosiana kosa mandrindra sidina dimy amin'ny faharetana mitovy aminy, hoy izy.
Eo amin'ny tsena fizahan-tany manan-danja indrindra any Egypte i Russia, satria nihoatra ny 3.1 tapitrisa ny mpizahatany tany Egypt tamin'ny 2014, efa ho 33 isan-jaton'ny mpizahatany miditra rehetra tamin'io taona io, hoy i Lamia Kamel, mpanampy minisitry ny fizahan-tany sy ny fahagola ho an'ny Fisondrotana.
Nohamafisiny fa ny mpiasa rehetra amin'ny hotely, faritra fialamboly ary tranombakoka dia vita vaksiny fanoherana ny COVID-19.
"Faly ireo turista rosiana hiverina any Hurghada sy Sharm el-Sheikh hankafy ny torapasika mamiratra, ny toetr'andro mahatalanjona, ary koa ny hetsika an-dranomasina," hoy i Kamel.
Betsaka ny fivezivezena fizahan-tany no handray anjara amin'ny famoronana asa vaovao any Egypt, indrindra mandritra ny areti-mandringana, miaraka amin'ny isan'ny sidina mivantana avy any Russia mankany Hurghada ary Sharm el-Sheikh amin'ny farany mety ho 20 isan-kerinandro.
Tamin'ny volana oktobra 2015, nampiato ny sidina mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina egyptiana i Russia taorian'ny fianjeranan'ny fiaramanidina rosiana tany avaratra sinay. Nanomboka tamin'izay dia niasa tamin'ny fanavaozana ny fepetra fiarovana sy fiarovana azy amin'ny seranam-piaramanidina rehetra eraky ny firenena i Egypt.
Tamin'ny volana aprily 2018 dia nanohy ny sidina i Russia Moscow ary Cairo, saingy nitazona ny fandrarana ny sidina mankany Hurghada sy Sharm el-Sheikh.